၁၃၀၀ ြပည့်​နှစ် အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​ကား​ ြမန်မာ့​သမိုင်း​တွင် စာတင်ရ​ေလာက်​ေအာင် ြဖစ်​ေလသည်။ အကယ်၍သာ ​ေရနံ​ေြမမှ အလုပ်သမား​များ​၏ သပိတ်တပ်ြကီး​ ​ေရနံ​ေြမမှ ရန်ကုန်သို့​ မိုင် ( ၄၀၀ ) ခရီး​ကို ​ေြခလျှင် ချီတက်ပွဲြကီး​ ( ဝါ ) ၁၃၀၀ ြပည့်​နှစ် အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​ကို မဆင်နွဲနိုင်လျှင်၊​ ဆင်နွဲသည့်​တိုင် အရင်း​ရှင် ​ေရနံကုမ္ပဏီများ​နှင့်​ အစိုး​ရတို့​ ပူး​ေပါင်း​၍ သပိတ်တပ်ြကီး​ကို ြဖိုခွဲရာ၌ အလုပ်သမား​တို့​က အရှံုး​ေပး​ခဲ့​လျှင် ြဗိတိသျှနယ်ချဲ့​သမား​တို့​ ဤမျှ​ေလာက် ြမန်ြမန် ြပည်တွင်း​မှ ထွက်​ေြပး​စရာမရှိ​ေပ။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်​ေရး​သ် ယခုထက် ​ေစာစီး​စွာ ရဖွယ်မရှိဟု ဆို​ေသာ် ဆိုနိုင်​ေပသည်။
အဘယ်​ေြကာင့်​ဆို​ေသာ် ​ေရနံ​ေြမအလုပ်သမား​များ​သည် အရင်း​ရှင်တို့​ ​ေြခာက်​ေသာ်လည်း​ မ​ေြကာက်၊​ ဇွဲမ​ေလျာ့​၊​ ဖိသည်ကိုလည်း​ တန်ြပန်ြကွခဲ့​ေသာ​ေြကာင့်​ အလုပ်သမား​၊​ လယ်သမား​နှင့်​ ​ေကျာင်း​သား​များ​ ပထမဆံုး​အြကိမ် ​ေပါင်း​စည်း​မိြပီး​ ြပည်သူလူထုနှင့်​ တကွ နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​ အင်အား​စုြကီး​ ြကီး​ထွား​လာကာ အံုြကွ တိုက်ပွဲဝင်​ေသာ​ေြကာင့်​ လည်း​ေကာင်း​၊​ နိုင်ငံတကာ ​ေရး​ရာများ​နှင့်​ ဆက်စပ်၍လည်း​ေကာင်း​၊​ ြမန်မာြပည်လွတ်လပ်​ေရး​ ရလာြခင်း​ ြဖစ်​ေလသည်။
​ေရနံ​ေြမတွင် အရင်း​ရှင်က သပိတ်ကို ​ေရရှည်​ေအာင်လုပ်သည်။ ​ေရနံ အလုပ်သမား​များ​၏ ​ေတာင်း​ဆို ချက်များ​ကို ( ၁၈ ) လတိုင်​ေအာင် တစ်လံုး​ တစ်ပါဒမျှ လိုက်​ေလျာြခင်း​မြပုဘဲ အလုပ်သမား​များ​ ဒုက္ခနှင့်​ ရင်ဆိုင်ရ​ေအာင် လုပ်သည်။ အလုပ်မ​ေပး​ဘဲထား​သည်။ သပိတ်​ေမှာက် အလုပ်သမား​များ​၏ ​ေနရာတွင် ​ေတာက လူများ​ေခါ်၍ အလုပ်ခန့်​သည်။ သပိတ်​ေမှာက် အလုပ်သမား​များ​ကို အလို​ေတာ်ရိ သစ္စာ​ေဖာက်များ​မှ တစ်ဆင့်​ သပိတ်ြပိုကွဲ​ေအာင် အမျိုး​မျိုး​လုပ်​ေဆာင်ခဲ့​သည်။
ဤကာလအတွင်း​ သပိတ်​ေမှာက်အလုပ်သမား​ များ​မှာ အငတ်ငတ် အြပတ်ြပတ် ဒုက္ခခံြကရသည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေရနံအလုပ်သမား​များ​က ဇွဲမ​ေလျာ့​ေပ။ အရင်း​ရှင်ဘီအိုစီက သပိတ်​ေရရှည်ြပီး​ အငတ်ငတ် အြပတ်ြပတ် ြဖစ်လာ​ေသာအခါ သပိတ်ြကီး​ ြပိုကွဲလာလိမ့်​မည်ဟူ​ေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်​ သပိတ်ကို ​ေြကာက်လာ​ေအာင် လုပ်ြခင်း​ ြဖစ်​ေသာ်လည်း​ ​ေရနံအလုပ်သမား​ များ​က မ​ေြကာက်ခဲ့​ေချ။
အကယ်၍ အရင်း​ရှင်ဘီအိုစီနှင့်​ နယ်ချဲ့​များ​က မ​ေြကာက်လျှင် မ​ေကွး​တွင် ပုဒ်မ ( ၁၄၄ ) ထုတ်ြပီး​ တား​လိမ့်​မည် မဟုတ်​ေပ။ ​ေချာက်ြမို့​တွင် ဆိုလျှင် သပိတ်တား​ အမျိုး​သမီး​များ​ကို အတင်း​ဆွဲ အတင်း​ခွဲ ရိုက်နှက်ကန်​ေကျာက်သည်။ ဆံပင်ဆွဲ၍ ကား​ေပါ် အတင်း​တင်သည်။ ​ေရပိုက်နှင့်​ တရြကမ်း​ပက်၍ နှိမ်နင်း​သည်။ အတင်း​ဝင်ဖမ်း​ြပီး​ ​ေထာင်ချပစ်သည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ တက်ြကွ ​ေန​ေသာ စိတ်ဓါတ်ကိုကား​ ြဖံု၍ မရ​ေပ။
မ​ေကွး​တွင် ​ေရနံ သပိတ်တပ်ြကီး​ကိုပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထား​သည့်​ အြပင် ​ေနာက်မဆုတ်ဘဲ ​ေရှ့​တိုး​ေန​ေသာ အလုပ်သမား​များ​ကို လှံစွပ်နှင့်​တား​သည်မရ။ နံပါတ်တုတ်နှင့်​ ရိုက်သည် မရ။ ြမင်း​တပ်နှင့်​ နှိမ်နင်း​သည်။ လဲသူလဲ၊​ ကွဲသူကွဲသည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေနာက်မဆုတ်ခဲ့​ေပ။ အရင်း​ရှင်စနစ် တိုက်ဖျက်​ေရး​၊​ နယ်ချဲ့​ ဆန့်​ကျင်​ေရး​ စိတ်ဓါတ် ြပင်း​ထန်​ေသာ အလုပ်သမား​များ​ကို ြပည်သူလူထုက အား​ေပး​ ကူညီြက​ေလသည်။
ဤသို့​လျှင် ​ေရနံ အလုပ်သမား​များ​သည် အရင်း​ရှင်တို့​၏ ဖိနှိပ် ​ေသွး​စုပ်မှုကို မခံနိုင်၍ ချီတက်လာြကရာ တို့​ဗမာ အစည်း​အရံုး​မှ သခင်​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ကလည်း​ ​ေရနံ​ေြမသပိတ်တပ်ြကီး​နှင့်​ အတူ ပါဝင်ဆင်နွဲြကသည်။ ဤတွင် အမျိုး​သား​လွတ်လပ်​ေရး​ နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​ ​ေရစီး​ေြကာင်း​ထဲသို့​ အလုပ်သမား​၊​ လယ်သမား​၊​ သခင်များ​နှင့်​ ​ေကျာင်း​သား​များ​ ​ေပါင်း​စည်း​ မိြက​ေလ​ေတာ့​သည်။
သို့​ကလို သပိတ်အင်အား​ ြကီး​မား​လာ​ေသာအခါ ြဗိတိသျှနယ်ချဲ့​သမား​များ​က အလုပ်သမား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ကို ဖမ်း​ဆီး​ ​ေထာင်ချသည်။ သခင်​ေခါင်း​ေဆာင်များ​၊​ ​ေကျာင်း​သား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ကို ဖမ်း​ဆီး​ေထာင်ချြပီး​၊​ နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​ အမျိုး​သား​လွတ်လပ်​ေရး​ အင်အား​စုြကီး​ကို ြဖိုခွဲ​ေလသည်။
လယ်သမား​များ​ကလည်း​ ရန်ကုန်သို့​ ချီတက်လာြကသည်။ နယ်ချဲ့​သမား​များ​၏ လုပ်ရပ်ကို တစ်ြပည်လံုး​ မခံမရပ် ြဖစ်လာြပီး​ အလုပ်သမား​ သပိတ်​ေတွ များ​ြပား​လာသည်။ ​ေကျာင်း​သား​သပိတ်များ​ ြမန်မာြပည် တစ်ဝန်း​တွင် ​ေပါ်​ေပါက်လာသည်။ ထိုကာလသည် နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​ ၊​ ဖိနှိပ်မှု​ေတာ်လှန်​ေရး​ အမျိုး​သား​ လွတ်လပ်​ေရး​တိုက်ပွဲ အြပင်း​အထန်ဆံုး​ကာလ ြဖစ်လာ​ေလသည်။
သပိတ် သပိတ်….​ေမှာက် ​ေမှာက်။
မီး​တုတ် မီး​တုတ် …. ရှို့​ရှို့​၊​
သူပုန် သူပုန်…. ထထ။
သခင်မျိုး​ေဟ့​ ... တို့​ဗမာ၊​
ဓနရှင်​ေတွ … ပျက်စီး​ပါ​ေစ။
အ​ေရး​ေတာ်ပံု … ​ေအာင်ပါ​ေစ။
ဟူ​ေသာ ​ေြကွး​ေြကာ်သံများ​သည် တစ်ြပည်လံုး​ သို့​ ပဲ့​တင်ထပ် ရိုက်ခတ်သွား​ေလ​ေတာ့​သည်။
သို့​ကလို အရင်း​ရှင် ကုမ္ပဏီ၏ ​ေသွး​စုပ်ခံရမှု ဆန့်​ကျင်​ေရး​ တိုက်ပွဲမှ အမျိုး​သား​လွတ်လပ်​ေရး​ ဆန့်​ကျင်​ေရး​ တိုက်ပွဲြကီး​သို့​ ကူး​ေြပာင်း​ သွား​ေစခဲ့​ေသာ အ​ေြကာင်း​ရင်း​မှာ ဤသို့​တည်း​။
​ေချာက်၊​ ​ေရနံ​ေချာင်း​၊​ လမ်း​ရွာ၊​ ​ေရနံချပ် ၊​ တ​ေယာ်ကုန်း​၊​ ပိုလာ စသည့်​ ​ေရနံ​ေြမ အလုပ်သမား​ များ​မှာ လူချင်း​ အတူတူ ၊​ သူချင်း​ မျှမျှ ​ေနရသူများ​ မဟုတ်​ေပ။ မ​ေသရံု​ေပး​၊​ မ​ေသရံု​ေကျွး​သည့်​ ​ေရနံ ကုမ္ပဏီ၏ အြမတ်ထုတ် ​ေသွး​စုပ်မှုကို အလူး​အလဲ ခံြကသူများ​ ြဖစ်​ေလသည်။ စီး​ပွား​ေရး​၊​ ကျန်း​မာ​ေရး​၊​ လူမှု​ေရး​၊​ ပညာ​ေရး​တို့​တွင် အနိမ့်​ဆံုး​ လူတန်း​စား​များ​ ြဖစ်သည်။ ထိုစဉ်က အနိမ့်​ဆံုး​ လခမှာ ( ၂၀ ) ​ေကျာ်​ေကျာ် ြဖစ်၍ အြမင့်​ဆံုး​ လစာမှာ ဗိုလ်လွတ် ( ၄၅ ) ကျပ်သာ ြဖစ်​ေလသည်။
ဘီအိုစီ အရင်း​ရှင် ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၃၇ ခုနှစ် ချုပ် စာရင်း​ အရ ​ေငွ​ေပါင်း​ ( ၇ ) ကု​ေဋ ( ၅ ) သန်း​ခန့်​ သပိတ်ဝင် အိတ်ဝင် ြမတ်စွန်း​ေလ၏။ ​ေသွး​နှင့်​ ​ေချွး​နှင့်​ ရင်း​ရသည့်​ အလုပ်သမား​များ​ အတွက်ကား​ တစ်နှစ်လျှင် ​ေငွငါး​သန်း​မျှသာ လုပ်ခအြဖစ်​ေပး​ရသည်။ အလုပ်သမား​ များ​ကမူ ဘီအိုစီ အတွက် အြမတ်​ေငွ ( ၇ ) ကု​ေဋ ရဖို့​လည်း​ လုပ်ရသည်။ လခ​ေငွ ( ၅ ) သန်း​ ရဖို့​လည်း​ လုပ်ရသည်။ ထို​ေငွ အား​လံုး​ထဲမှ အလုပ်သမား​ အတွက် ရသည့်​ ​ေဝစုကို တွက်ရလျှင် ( ၁၆ ) ပံု ( ၁ ) ပံုသာ ြဖစ်သည်။ နာရီနှင့်​ တွက်လျှင် အလုပ်သမား​ အဖို့​ တစ်​ေန့​လျှင် အလုပ်ချိန် ရှစ်နာရီ ခွဲမှာ အလုပ်သမား​များ​အ​ေပါ် ကုပ်​ေသွး​စုပ် အြမတ်ထုတ်​ေန​ေသာ ကုမ္ပဏီ အတွက် အလုပ်လုပ်​ေပး​ရ​ေသာ အချိန် ြဖစ်​ေလသည်။
​ေရနံ​ေြမ အလုပ်သမား​ များ​ အဖို့​ ​ေသွး​နှင့်​ ​ေချွး​နှင့်​ အသက်နှင့်​ ရင်း​ရသည်ကို ြကည့်​ပါဦး​။ ​ေရနံတွင် စက်ရံု အလုပ်သမား​များ​မှာ အင်မတန် ပူြပင်း​လှသည့်​ ​ေနပူရှိန်​ေအာက်တွင် အလုပ်လုပ်ြကရသည်။ ​ေရနံ​ေြမ ​ေဒသမှာ မိုး​ေခါင်​ေရရှား​ ပူြပင်း​ေြခာက်​ေသွ့​သည့်​ ​ေဒသြဖစ်သည်။ ​ေရနံ အလုပ်သမား​များ​မှာ ​ေတာင်ကုန်း​ေတာင်ချိုင့်​များ​ြကား​တွင် ​ေနပူကျဲကျဲ​ေအာက်၌ သံပိုက်လံုး​များ​ ၊​ သံထည် ပစ္စည်း​များ​ ထမ်း​၍ အလုပ်လုပ်ြကရသည်။ ​ေနပူဒဏ်၊​ ​ေရနံ​ေငွ့​ရိုက်သည့်​ ဒဏ်၊​ ​ေလး​လံသည့်​ ဝန်ကို ထမ်း​ရသည့်​ ဒဏ် အမျိုး​မျိုး​ကို အလုပ်သမား​များ​ ခံစား​ြကရသည်။ ထိုမျှမက ​ေရနံတွင်း​ အလုပ်သမား​များ​ကို လွင်တီး​ေခါင်သို့​ ထွက်၍ အလုပ်မလုပ်ရ​ေစကာမူ တွင်ခံု၊​ ​ေဖာက်စက်ခံု၊​ ပန်း​ပဲနှင့်​ သံရည်ကျို၊​ လက်သမား​ လုပ်ရသူ များ​သည် သွပ်မိုး​ သွပ်ကာရံုြကီး​အတွင်း​၌ ​ေနပူရှိန်​ေြကာင့်​ ပူြပင်း​သည့်​ ဒဏ်ကို ခံရရံုသာမက ပန်း​ပဲဖိုမှ မီး​အရှိန်ကိုလည်း​ ခံရသည်။ စက်တူမြကီး​ ထိခိုက်မိ၍ ​ေြခကျိုး​၊​လက်ပဲ့​ရသူ များ​၊​ တွင်ခံုစက်ထိ၍ လက်ြပတ်ခံရသူများ​၊​ မျက်စိထဲ သံစဝင်၍ မျက်စိပျက်ရသူများ​လည်း​ မနည်း​လှ​ေချ။
ဓာတ်ဂ​ေလ၊​ ခဲဂ​ေဟ၊​ ​ေလဂ​ေဟ ဌာနများ​၌ အလုပ်လုပ်ရသူမှာလည်း​ အပူဓာတ်၊​ အလင်း​ဓာတ်လွန်​ေသာ ​ေြကာင့်​ အရွယ်မတိုင်မီ မျက်စိ ပျက်ရြခင်း​များ​လည်း​ ရှိသည်။ ​ေရနံ၊​ ဖ​ေယာင်း​နှင့်​ အြခား​ ​ေရနံမှ ထွက်ကုန် တို့​ကို ​ေန့​စဉ်နှင့်​ အမျှ အလုပ်သမား​များ​ ထိခိုက်ကိုင်တွယ်​ေနြကရသြဖင့်​ အ​ေရြပား​ေရာင်​ေရာဂါ၊​ အသား​ေရာင်​ေရာဂါ၊​ အသား​တိုး​ေရာဂါများ​ ဖိစီး​ခံရ​ေသး​သည်။ ​ေလ​ေကာင်း​ေလသန့်​ကို လံု​ေလာက်စွာ မရှူရှိုက်ရသြဖင့်​ အဆုတ်​ေရာဂါ ဖိစီး​ခံရသည်။
၁၉၃၈ ခုနှစ် စံုစမ်း​ေရး​ ​ေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ​ေရနံ ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်သူ အလုပ်သမား​ တစ်ဦး​လျှင် ( ၁၀ ) ​ေပ ပတ်လည် အခန်း​က​ေလး​ တစ်ခန်း​ သာ ရသည်။ တန်း​လျား​ြကီး​တစ်ခုတွင် ထိုသို့​ ( ၁၀ ) ​ေပ ပတ်လည် အခန်း​က​ေလး​များ​ ဖွဲ့​၍ ​ေပး​ထား​သည်။ ထိုအခန်း​မှာလည်း​ တစ်ထပ်တန်း​လျား​၊​ အခန်း​က​ေလး​သာ ြဖစ်​ေလသည်။ ထိုတစ်ထပ်ခန်း​က​ေလး​တွင်ပင် ဧည့်​ခန်း​ ၊​ ထမင်း​စား​ခန်း​၊​ အိမ်​ေထာင်ပစ္စည်း​ထား​ခန်း​၊​ အိမ်ခန်း​ ဟူ၍ ​ေရလဲသံုး​ကာ ငါး​ပိငါး​ချဉ်သိပ် ​ေနရ​ေသာ်လည်း​ ဥ​ေရာပ တိုက်သား​ မျက်နှာြဖူ အရာရှိများ​ အတွက်မှာမူကား​ စတုရန်း​ေပ​ေပါင်း​ ( ၁၀၀၀ ) ခန့်​ ကျယ်သည့်​ နှစ်ထပ်အိမ်ြကီး​နှင့်​ ဇိမ်ကျကျ ​ေနြကရ​ေလသည်။ ထိုသို့​ အိမ်ြကီး​ အိမ်​ေကာင်း​နှင့်​ ​ေနရသည့်​ ြပင် ထမင်း​ချက်၊​ စား​ပွဲထိုး​၊​ ​ေမာ်​ေတာ်ကား​ေမာင်း​သူ၊​ ြခံ​ေစာင့်​များ​လည်း​ ​ေပး​ထား​ေသး​သည်။
နယ်ချဲ့​ြဗိတိသျှ အရင်း​ရှင် အစိုး​ရသည် ဤသို့​ ဖိနှိပ် ​ေသွး​စုပ် ချယ်လှယ်​ေနသည်ကို အား​မရ​ေသး​ဘဲ ၁၉၃၈ ခု ထဲတွင် ဘီအိုစီ ကုမ္ပဏီသည် နှစ်စဉ်​ေပး​ေနကျြဖစ်​ေသာ ဘာသာ​ေရး​ အလုပ်ပိတ်ရက် ( ၁၀ ) ရက် အစား​ ( ၇ ) ရက်သို့​ ​ေလျာ့​ချလိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အဆိုအရမူ ဘာသာ​ေရး​ ပိတ်ရက်ကို ​ေလျာ့​ချ​ေသာ်လည်း​ လုပ်ခ မပျက်ခွင့်​ရက်ကို ( ၁၀ ) ရက်အထိ အလုပ်သမား​များ​ လိုသည့်​အခါတွင် ယူခွင့်​ြပုမည်ဟု ဆိုသည်။
သို့​ရာတွင် ​ေရနံ​ေြမ အလုပ်သမား​များ​သည် တစ်နှစ်လျှင် ဘာသာ​ေရး​ခွင့်​ ( ၁၀ ) ရက်နှင့်​ လစာမပျက် ခွင့်​ရက် ( ၂၀ ) ပင် မရရှိသည် တစ်​ေြကာင်း​၊​ အလုပ်သမား​များ​မှာ ဘာသာ​ေရး​ ပိတ်ရက် (၁၀ ) ရက်ကို မူလ ရရှိြပီါ်သား​ အခွင့်​အ​ေရး​ ြဖစ်ပါလျက် ယခုမူ မတရား​ေလျာ့​ချခံရြခင်း​ ြဖစ်သည်က တစ်​ေြကာင်း​၊​ ဤကဲ့​သို့​ ဘာသာ​ေရး​ရက်များ​ကို အ​ေြကာင်း​မဲ့​ ​ေလျာ့​ချလိုက်ြခင်း​သည် ဘာသာ​ေရး​အရ ဖိနှိပ်ြခင်း​ ြဖစ်သည်။ လူမျိုး​ေပျာက်၊​ ဘာသာ​ေပျာက်​ေအာင် ဖန်တီး​ြခင်း​ ြဖစ်သည်ဟု ယူဆြကသည် တစ်​ေြကာင်း​ေြကာင့်​ လုပ်သား​ထု အစည်း​အ​ေဝး​ ကျင်း​ပ၍ အြပင်း​အထန် ကန့်​ကွက် အ​ေရး​ဆိုခဲ့​ြက​ေလသည်။
ထို့​ြပင် ဘီအိုစီ ကုမ္ပဏီ စာ​ေရး​စာချီများ​ ရရှိခံစား​ ​ေနသည့်​အတိုင်း​ တစ်နှစ်လျှင် ဘာသာ​ေရး​ခွင့်​ရက် ( ၁၀ ) ရက်၊​ လစာမပျက်ခွင့်​ရက် ( ၂၀ ) စုစု​ေပါင်း​ ( ၃၀ )ခွင့်​ ြပုရန်နှင့်​ အစိုး​ရ၊​ ကုမ္ပဏီ၊​ အလုပ်သမား​ ကိုယ်စား​လှယ်ပါဝင်​ေသာ အဖွဲ့​က အုပ်ချုပ်ရန် ​ေတာင်း​ဆိုြကသည်။ သို့​ေသာ် ဘီအိုစီ ကုမ္ပဏီက လိုက်​ေလျာြခင်း​ မရှိခဲ့​ေချ။
ဤအ​ေတာအတွင်း​ ​ေရနံ​ေြမ လုပ်သား​ထုက ဘီအိုစီ ကုမ္ပဏီသို့​ ​ေတာင်း​ဆိုချက် ( ၁၂ ) ချက်ကို တင်သွင်း​ေတာင်း​ဆိုြကသည်။ မလိုက်​ေလျာပါက ြပင်း​ထန်စွာ တိုက်ပွဲ ဝင်မည့်​ အ​ေြကာင်း​ ဆန္ဒြပသည့်​ အ​ေနြဖင့်​ စတိ သပိတ် ( ၃ ) ရက်​ေမှာက်ြကသည်။
​ေတာင်း​ဆိုချက် ( ၁၂ )ချက်မှာ
(၁) အလုပ်သမား​ တန်း​လျား​ေနအိမ်များ​ကို ​ေန​ေလာက်​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​ရန်။
(၂) အလုပ်သမား​တန်း​လျား​များ​ကို လျပ်စစ်မီး​များ​ တပ်ဆင်​ေပး​ရန်။
(၃) အလုပ်သမား​တန်း​လျား​နှင့်​ ရပ်ကွက်များ​၌ ​ေသာက်သံုး​ေရ လံု​ေလာက်စွာ​ေပး​ရန်။
(၄) အလုပ်သမား​ သား​သမီး​များ​ကို အခမဲ့​ ပညာသင်​ေပး​ရန်နှင့်​ ​ေကျာင်း​များ​ ြပည့်​စံုစွာ​ေဆာက်လုပ်​ေပး​ရန်။
(၅) အလုပ်သမား​များ​၏ ဇနီး​သား​မယား​များ​၏ ကိုယ်ဝန်​ေဆာင်ကို ​ေဆး​ရံုဆရာဝန်က ဂရုစိုက်အချိန်ြပည့်​ ​ေစာင့်​ေရှာက်ကုသ​ေပး​ရန်နှင့်​ ​ေဆး​ရံုတက်ခွင့်​ေပး​ရန်။
(၆) အလုပ်သမား​များ​အား​ လစာမပျက် နှစ်ပတ်လည် ခွင့်​ရက်များ​ေပး​ရန်။
(၇) အလုပ်ဌာနတိုင်း​ အလုပ်ခွင်တိုင်း​၌ ​ေသာက်သံုး​ေရများ​ လံု​ေလာက်​ေအာင် ထား​ေပး​ရန်၊​ ထမင်း​စား​ခန်း​များ​ ထား​ေပး​ရန်။
(၈) အလုပ်သမား​များ​ အပန်း​ေြဖနိုင်ရန်နှင့််​ ​ေပျာ်ပွဲ ရွှင်ပွဲများ​ ြပုလုပ်နိုင်ရန် အလုပ်သမား​ ရိပ်သာ များ​ ​ေဆာက်လုပ်ထား​ေပး​ရန်။
(၉) အလုပ်သမား​များ​ ကျန်း​မာ​ေရး​ အ​ေြခအ​ေနအရ ​ေနထိုင်မ​ေကာင်း​သည့်​အခါ ​ေဆး​ရံုတက်​ေနစဉ် လစာမပျက် ခွင့်​ရက်​ေပး​ရန်။
(၁၀) ခွင့်​သွား​ေသာ အလုပ်သမား​ေနရာတွင် အလုပ်ခွင့်​ရှိ အလုပ်သမား​ တက်​ေရာက် လုပ်ကိုင်ခွင့်​ေပး​ရန်နှင့်​ ခွင့်​ယူသွား​ေသာ အလုပ်သမား​၏ လစာအဆင့်​အတန်း​ ( Acting Pay )အတိုင်း​ ​ေပး​ရန်။
(၁၁) အလုပ်ခွင်တွင် အလုပ်လုပ်​ေန​ေသာ အလုပ်သမား​ ​ေသဆံုး​သွား​ပါက သို့​မဟုတ် အလုပ်မှ နုတ်ထွက်သွား​ပါက အြပင်လူများ​ မခန့်​ထား​ဘဲ အလုပ်ခွင်တွင်း​မှ အလုပ်သမား​များ​ကို လုပ်သက် အရည်အချင်း​ အလိုက် ခန့်​ထား​ေပး​ရန်။
(၁၂) အစည်း​အရံုး​ဝင် အလုပ်သမား​များ​ကို မတရား​နှိပ်စက် ညှင်း​ပန်း​ြခင်း​၊​ ဖိနှိပ်ြခင်း​ မြပုလုပ်ရန် တို့​ ြဖစ်သည်။
အထက်ပါ ​ေတာင်း​ဆိုချက် ( ၁၂ )ချက်အနက် ဘီအိုစီ ကုမ္ပဏီက ( ၃) ချက်သာ လိုက်​ေလျာြပီး​ ကျန်အချက်များ​ကို မလိုက်​ေလျာခဲ့​ေချ။ သို့​ြဖင့်​ ၁၉၃၈ ခု၊​ ဇန်နဝါရီလ ( ၈ ) ရက် ( စ​ေန​ေန့​ )တွင် စတင်၍ ​ေချာက်​ေရနံ​ေြမ သပိတ်ြကီး​ေမှာက်​ေလသည်။ ဤသပိတ်ကား​ ြမန်မာ့​လွတ်လပ်​ေရး​ သမိုင်း​တွင် ​ေမ့​ေပျာက်၍ မရသည့်​ နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​လှုပ်ရှား​မှုြကီး​ ြဖစ်​ေလသည်။ ဤသပိတ်ြကီး​သည် အနှစ်နှစ်အလလက ဖိနှိပ်ညှင်း​ပန်း​မှုများ​ေြကာင့်​ အံုြကွ​ေပါက်ကွဲလာ​ေသာ သပိတ်ြကီး​ ြဖစ်သည်။ သပိတ်သည် ( ၁၁ ) လမျှသာ ြကာသည့်​တိုင် ​ေြပလည်မှုမရခဲ့​ေပ။ ထို့​ေြကာင့်​သပိတ်​ေမှာက် ​ေရနံလုပ်သား​ထုက ရန်ကုန်အ​ေရာက် ​ေြခကျင်ချီတက်၍ အ​ေရး​ဆိုသည့်​နည်း​ြဖင့်​ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဆံုး​ြဖတ်ြကြပီး​ ၊​ ၁၉၃၈ ခု၊​ နိုဝင်ဘာလ (၃၀ ) ရက်​ေန့​ တွင် ​ေချာက်ြမို့​မှ ​ေရနံလုပ်သား​တပ်ြကီး​စတင်ချီတက်သည်။ အာဠာဝက သခင်ဖိုး​လှြကီး​၊​ ဦး​ေဆာင်​ေသာ အလုပ်သမား​ ​ေခါင်း​ေဆာင်များ​၊​ သခင်များ​က ဦး​ေဆာင်ကာ ချီတက်ြကရာ ၁၉၃၈ ခု၊​ ဒီဇင်ဘာလ ( ၄ ) ရက်​ေန့​တွင် မ​ေကွး​ြမို့​သို့​ေရာက်သည်။ ​ေချာက်မှ စထွက်စဉ် ​ေရနံ တပ်သား​ တစ်​ေထာင်​ေကျာ်မျှသာ ရှိ​ေသာ်လည်း​ မ​ေကွး​သို့​ ​ေရာက်​ေသာအခါ ​ေရနံတပ်သား​ေပါင်း​ ( ၁၅၀၀ ) ခန့်​အထိတိုး​လာသည်။ ​ေရနံလုပ်သား​တပ်ြကီး​ မ​ေကွး​တွင် တပ်စခန်း​ ချ​ေနစဉ် တို့​ဗမာ အစည်း​အရံုး​မှ သခင် ​ေခါင်း​ေဆာင်များ​၊​ ​ေကျာင်း​သား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ နှင့်​ ပူး​ေပါင်း​ကာ တရား​ပွဲများ​ ကျင်း​ပြကသည်။ ​ေရနံတပ်ြကီး​ ရန်ကုန်အ​ေရာက် ​ေအာင်ြမင်စွာ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်​ေရး​အတွက် လံုး​ပမ်း​ြကသည်။ အစိုး​ရဘက်မှလည်း​ ​ေရနံတပ်ြကီး​ ရန်ကုန်သို့​ ဆက်လက်မချီတက်နိုင်​ေစရန် ​ေအာက်ပါ နည်း​များ​ြဖင့်​ ြကိုး​စား​ြကသည်။ အလုပ့်​သမား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​နှင့်​ ​ေကျာင်း​သား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ကို ဖမ်း​ဆီး​ြခင်း​၊​ ဥပ​ေဒြဖင့်​ တား​ြမစ်ြခင်း​၊​ ပုလိပ်တပ်ဖွဲ့​ြဖင့်​ ဟန့်​တား​ြခင်း​၊​ ​ေဖျာင်း​ဖျ​ေြပာဆိုြခင်း​ တို့​ ြဖစ်သည်။
ထိုသို့​ အစိုး​ရက အမျိုး​မျိုး​ ဟန့်​တား​ဖိနှိပ်သည့်​ြကား​မှပင် ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊​ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂ )ရက်​ေန့​တွင် ​ေရနံတပ်ြကီး​သည် မ​ေကွး​ြမို့​မှ ရန်ကုန်သို့​ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့​ြကသည်။
​ေရနံတပ်ြကီး​မ​ေကွး​မှ ချီတက်လာရာ ၁၉၃၈ ခု၊​ ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၀ )ရက်​ေန့​တွင် ြပည်ြမို့​သို့​ေရာက်သည်။ ​ေရနံတပ်ြကီး​ ြပည်ြမို့​သို့​ ​ေရာက်သည့်​ေန့​တွင် ရန်ကုန်၌ တတိယ တက္ကသိုလ်​ေကျာင်း​သား​ သပိတ် ြဖစ်ပွား​သည်။ မ​ေကွး​ြမို့​ေရာက် ​ေရနံတပ်ြကီး​ကို တရား​ေဟာသည့်​ ​ေကျာင်း​သား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ြဖစ်​ေသာ ကိုဗဟိန်း​နှင့်​ ကိုဗ​ေဆွတို့​ မ​ေကွး​တွင် အဖမ်း​ခံရြပီး​ေနာက် ​ေထာင်နှစ်နှစ် အြပစ်​ေပး​ခံရသည်ကို မ​ေကျနပ်၍ တက္ကသိုလ်​ေကျာင်း​သား​များ​ ဦး​ေဆာင်ကာ ရန်ကုန်ရှိ ​ေကျာင်း​သား​များ​က အတွင်း​ဝန်များ​ရံုး​ြကီး​ကို ဝိုင်း​ြကသည်။ သပိတ်​ေမှာက် ​ေကျာင်း​သား​ထုက မ​ေကွး​တွင် အဖမ်း​ခံရ​ေသာ ​ေကျာင်း​သား​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ အြမန်လွှတ်​ေပး​ေရး​။ ​ေရနံ သပိတ်​ေတာင်း​ဆိုချက်များ​လိုက်​ေလျာ​ေရး​၊​ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့်​ ဥပ​ေဒများ​ ရုပ်သိမ်း​ေရး​တို့​ ကို ​ေတာင်း​ဆို ဆန္ဒြပြကသည်။ ယင်း​ေကျာင်း​သား​ သပိတ်ကို နယ်ချဲ့​အစိုး​ရက ရက်စက်စွာ နံပါတ်တုတ်နှင့်​ရိုက် ၊​ြမင်း​နှင့်​ တိုက်၍ လူစုခွဲသြဖင့်​ ​ေကျာင်း​သား​အချို့​ ဒဏ်ရာရြပီး​ ဂျပ်ဆင်​ေကာလိပ်​ေကျာင်း​သား​ ဗိုလ်​ေအာင်​ေကျာ် ကျဆံုး​ ခဲ့​ရသည်။ ထိုအခါ တစ်နိုင်ငံလံုး​ရှိ ​ေကျာင်း​သား​များ​ကပါ သပိတ်​ေမှာက်​ေသာ​ေြကာင့်​ အ​ေထွ​ေထွ ​ေကျာင်း​သား​သပိတ် ​ေပါ်​ေပါက်လာခဲ့​သည်။
​ေရနံတပ်ြကီး​က ရန်ကုန်သို့​ ချီတက်​ေနစဉ် ရန်ကုန်၌ ​ေကျာင်း​သား​များ​ သပိတ်​ေမှာက်​ေနစဉ်အတွင်း​ မှာပင် ပဲခူး​၊​ ြဖူး​၊​ လှည်း​ကူး​၊​ ​ေဝါ၊​ သထံု၊​ သနပ်ပင်၊​ သာယာဝတီ၊​ အင်း​စိန်တို့​မှ ​ေတာင်သူလယ်သမား​များ​ ကလည်း​ ယင်း​ြမို့​တို့​၏ နစ်နာချက်များ​ တင်ြပရန်နှင့်​ ​ေရနံလုပ်သား​တို့​၏ သပိတ်ကို ယူရန် ရန်ကုန်သို့​ ချီတက်လာြကသည်။ ​ေချာက်မှ ချီတက်လာ​ေသာ ​ေရနံတပ်နှင့်​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​တပ်တိုပသည် ၁၉၃၉ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ ( ၈ ) ရက်​ေန့​တွင် ရန်ကုန်သို့​ တစ်​ေန့​တည်း​ အတူ ဝင်​ေရာက်ခဲ့​ြကသည်။ ​ေရနံတပ်ြကီး​သည် ​ေချာက်မှ ရန်ကုန်အထိ မိုင် ( ၄၀၀ ) ​ေကျာ်ခရီး​ကို ရက်​ေပါင်း​ ( ၄၀ ) ြဖင့်​ ချီတက်ခဲ့​ြကြခင်း​ ြဖစ်သည်။ ဤသို့​ြဖင့်​ အလုပ်သမား​၊​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​များ​နှင့်​ ​ေကျာင်း​သား​များ​ ရန်ကုန်​ေရွှတိဂံု​ေစတီ​ေတာ်ြကီး​၌ ​ေပါင်း​စံုမိြကြပီး​ လူထု အစည်း​အ​ေဝး​ပွဲများ​ ကျင်း​ပြကသည်။ အလုပ်သမား​ အ​ေရး​မှ စခဲ့​ေသာ ဤအ​ေရး​ေတာ်ပံုသည် တြဖည်း​ြဖည်း​နှင့်​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​၊​ ​ေကျာင်း​သား​နှင့်​ ြပည်သူလူထုပါ ပါဝင်လာြပီး​ နယ်ချဲ့​ဆန့်​ကျင်​ေရး​ နှင့်​ အမျိုး​သား​ လွတ်​ေြမာက်​ေရး​အထိ ကျယ်ြပန့်​လာသည်။ အ​ေရး​ေတာ်ပံုအတွင်း​မှာပင် ‘ဗမာနိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ ​ေတာင်သူလယ်သမား​ အစည်း​အရံုး​’ နှင့်​ ‘ဗမာနိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား​ အစည်း​အရံုး​’ တို့​ကိုလည်း​ ​ေအာင်ြမင်စွာ ဖွဲ့​စည်း​နိုင်ခဲ့​သည်။ ထို့​ေြကာင့်​နယ်ချဲ့​ ဆန့်​ကျင်​ေရး​နှင့်​ အမျိုး​သား​ လွတ်​ေြမာက်​ေရး​ ကို လူတန်း​စား​အ​ေြခခံြဖင့်​ စည်း​ရံုး​လှုပ်ရှား​လာသည်ကို လည်း​ ​ေတွ့​ရသည်။
ရန်ကုန် ​ေရွှတိဂံု​ေစတီ​ေတာ်တွင် လူထု အစည်း​အ​ေဝး​ပွဲများ​ ကျင်း​ပ​ေနစဉ်အတွင်း​ ရန်ကုန်ြမို့​ေပါ်ရှိ စက်ရံုအလုပ်ရံုများ​ စတင် သပိတ်​ေမှာက်ြကသည်။ ထို့​ေနာက် တစ်နိုင်ငံလံုး​ရှိ စက်ရံုအလုပ်ရံုများ​မှ အလုပ်သမား​များ​၏ အ​ေထွ​ေထွ သပိတ်များ​ ဆက်တိုက် ​ေပါ်​ေပါက်လာသည်။ မန္တ​ေလး​တွင်လည်း​ ​ေကျာင်း​သား​နှင့်​ ရဟန်း​ရှင်လူ အတူလက်တွဲ၍ သပိတ်တိုက်ပွဲများ​ ဆင်နွဲြကသည်။ မန္တ​ေလး​ သပိတ်တွင် နယ်ချဲ့​အစိုး​ရ၏ ရက်စက်မှု​ေြကာင့်​ ​ေကျာင်း​သား​များ​နှင့်​ ရဟန်း​ရှင် အာဇာနည် ( ၁၇ ) ဦး​ ကျဆံုး​ခဲ့​ရသည်။ ထိုအခါ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း​ လံုး​တွင် လူတန်း​စား​ေပါင်း​စံု ပါဝင်သည့်​ သပိတ်များ​ ဆက်လက် ြဖစ်ပွား​ခဲ့​သည်။
ဤသို့​ြဖင့်​ ၁၃၀၀ ြပည့်​အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​ ဟူ၍ သမိုင်း​တွင်ခဲ့​ေလသည်။ အ​ေရး​ေတာ်ပံု၏ လတ်တ​ေလာ အကျိုး​သက်​ေရာက်မှုမှာ ​ေဒါက်တာဘ​ေမာ်၏ ညွှန့်​ေပါင်း​ အစိုး​ရ ြပုတ်ကျသွား​ြခင်း​ ြဖစ်သည်။ ​ေနာက်ပိုင်း​တွင် အလုပ်သမား​နှင့်​ ​ေတာင်သူလယ်သမား​တို့​၏ နစ်နာချက် အချို့​ကို ဘီအိုစီ ကုမ္ပဏီနှင့်​ အစိုး​ရတို့​ လိုက်​ေလျာခဲ့​ရ​ေလသည်။ အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​ ​ေကျး​ဇူး​ေြကာင့်​ ​ေရနံလုပ်သား​များ​၏ လုပ်အား​ခ တိုး​လာြခင်း​၊​ တန်း​လျား​များ​ ​ေကာင်း​မွန်လာြခင်း​၊​ လယ်သီး​စား​ ဥပ​ေဒများ​ ြပင်ဆင်​ေပး​ြခင်း​ တို့​ ြဖစ်သည်။ ထို့​ြပင် အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​ေြကာင့်​ ြပည်သူလူထု တစ်ရပ်လံုး​ နိုင်ငံ​ေရး​ အသိနိုး​ြကား​လာမှုနှင့်​ စည်း​လံုး​မှု ရရှိလာခဲ့​သည်။ ဤအမျိုး​သား​ စည်း​လံုး​ ညီညွတ်မှု နှင့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ နိုး​ြကား​မှုက လွတ်လပ်​ေရး​ အတွက် များ​စွာ အ​ေထာက်အကူ ြပုခဲ့​သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ၁၃၀၀ ြပည့်​နှစ် အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​သည် အလုပ်သမား​ လှုပ်ရှား​မှုနှင့်​ အရင်း​ရှင် နယ်ချဲ့​အုပ်ချုပ်​ေရး​ကို ဆန့်​ကျင်ခဲ့​သည့်​ လူထု အံုြကွမှု အြဖစ် ထင်ရှား​လာကာ အမျိုး​သား​ လွတ်​ေြမာက်​ေရး​ ၏ ထင်ရှား​ေသာ သ​ေကင်္တ တစ်ခုလည်း​ ြဖစ်ခဲ့​သည်။၁။
၁။ ( က ) ​ေရနံ​ေြမသခင်ဗတင်၊​ ၁၃၀၀ ြပည့်​နှစ် အ​ေရး​ေတာ်ပံု မှတ်တမ်း​၊​
( ခ ) ​ေမာင်သစ်လွင် ( လူထု ) ၊​ ၁၃၀၀ ြပည့်​ေရနံ​ေြမ အ​ေရး​ေတာ်ပံု ၊​ မန္တ​ေလး​ြကီး​ပွား​ေရး​ ပံုနှိပ်တိုက်၊​ ပြကိမ်၊​ ၁၉၆၇။
( ဂ ) ြမဟန်၊​ ကိုလိုနီ​ေခတ် ြမန်မာ့​ သမိုင်း​ အဘိဓာန် ၊​ တက္ကသိုလ်များ​ သမိုင်း​ သု​ေတသနဌာန၊​ တြကိမ် ၊​ ၁၉၉၉။
Posted by သစၥာ | သ​စ္စာ at 3:22 AM
Labels: ဖိုး​လှြကီး​, သခင်, ​ေထာင့်​သံုး​ရာြပည့်​နှစ် အ​ေရး​ေတာ်ပံု